Global Voices teny Malagasy » Ampiasaina ny Voambolana “Vaovao Faikany” Handrahonana ny Mpitsikera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Avrily 2017 5:37 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Indonezia, Kambodza, Malezia, Singapaoro, Fahalalahàna miteny, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, GV Mpisolovava
Sary: Pixabay, CC0 Public Domain
Milaza ny olan'ny vaovao faikany ny fanjakana maromaro ao Azia Atsimo atsinanana mba hampidirana lalàna henjana kokoa sy hampijaliana ireo mpikambana ao amin'ny media.
Singapaoro: Miaro ny ‘Soatoavin'ny Fiarahamonina’
Nanambara  ny drafi-panjakana hanavao ny Lalànan'ny Fandefasam-baovao tamin'ny Parlemanta ny Minisitry ny Fifandraisana sy ny Fampahalalam-baovao ao Singapaoro mba hialàna amin'ny fitomboan'ny vaovao diso sy ny “vaovao faikany” ato amin'ny aterineto.
Raha mikendry mivantana ny Singapaoreana ireo mpandefa vaovao avy any ampitan-dranomasina, mila mahazo antoka isika fa mifanaraka amin'ny soatoavin'ny fiarahamonina ny votoatin'izy ireo, ao anatin'izany ny tokony hanohanana ny firindràna ara-poko sy ara-pivavahana.
… rehefa misy fikambanana mitatitra vaovao matetika momba an'i Singapaoro mba hampahafantarana ny Singapaoreana ny resaka tombontsoam-bahoaka, manantena azy ireo hanao izany amin'ny fahatsapan-tena izahay.
Tsy nanome fanazavana antsipirahany momba ny fanitsiana kasaina atao ny minisitra saingy milaza ny vaovao malaza vao haingana ao amin'ny mpanao lalàna fa mety hitarika any amin'ny lalàna hentitra kokoa izany. Tamin'ny taona 2013, nitaky tamin'ireo tranonkalam-baovao lehibe i Singapaoro mba hisoratra anarana  amin'ny fanjakana sy handoa vola saran'ny lisansa. Nandrisika ireo manampahefana mba hanaisotra izay votoaty antserasera manimba ny “firindràna ara-tsosialy” ihany koa ny fitakiana fahazoan-dalana (lisansa).
Ny filazan'ny minisitra momba ny tokony hiarovana ny “soatoavin'ny fiarahamonina” amin'ny fiadiana amin'ny vaovao faikany dia nahatonga ireo mpikatroka ao amin'ny Wake Up Singapore  niahiahy fa mety ho raisin'ny manampahefana amin'ny ankapobeny izany ary mampiasa azy io ho fanamarinana hanivanana mpanohitra sy ny fomba fijery tsy tiana ao amin'ny firenena. Raha mikasika ireo olana saro-pady kokoa tahaka ny fahapelahana, lasa ny fanontaniana raha tsy handefitra intsony amin'ny votoaty antserasera milaza fifandraisana ara-pitiavana eo amin'ny samy lehilahy ny fanjakana. Eny tokoa, vao haingana ny praiminisitra no niaro ny lalànan'ny Sodomia lany andro ao amin'ny firenena raha nolazaina fa mampiroborobo ny ” soatoavim-piarahamonina”.
Kambodza: ‘Akatony, tsotra fotsiny. Roahy ry zareo. ‘
Taorian'ny niampangan'ny filoha Amerikana Donald Trump ny vondrona haino aman-jery sasany ho mitatitra vaovao faikany  sy nandràrana azy ireo tsy hanatrika valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Trano Fotsy, nampiasa hevitra tahaka izany ihany koa ireo mpitarika Kambodziana mba hanevatevana vondrona haino aman-jery sasany.
Nanoratra  momba izany tao amin'ny Facebook ny mpitondratenin'ny Filankevitry ny Minisitra, Siphan Phay:
Ny fandraràn'i Donald Trump ireo goavan'ny haino aman-jery iraisam-pirenena … dia mandefa hafatra mazava fa mahita ny Filoha Trump fa tsy maneho taratra ny tena zava-misy ny vaovao navoakan'ireo haino aman-jery ireo
Nahita ny Voice of Democracy, Voice of America sy ny Radio Free Asia ho vondrona haino aman-jery mitati-baovao momba an'i Kambodza tsy araka ny tokony izy. Rehefa nanontaniana momba izay fepetra horaisin'ny fanjakana raha tsy manova ny fomba fitaterany vaovao ireo vondrona haino aman-jery ireo, namaly mivantambana izy hoe: “Akatony, tsotra fotsiny. Roahy ry zareo.”
Ny Praiminisitra Hun Sen, izay efa teo amin'ny fitondrana nandritra ny telopolo taona kosa namerina  ny fihetseham-pon'i Trump sy ny mpitondrateniny amin'ny fanafihana ny haino aman-jery:
Manaja ny zo izahay, fa tsy ny zon'ny fanjakan'i Baroa, [fa kosa] ny zon'ny ny fanjakana tan-dalàna. Manantena aho fa mahatakatra izany ny namanay vahiny.
Nilaza koa izy fa “miresaka fotsiny momba ny zo ny sasany fa tsy mba miresaka mihitsy momba ny fitoniana sy ny fandriampahalemana.” Namerina ny famaritan'i Trump momba ireo vondrona haino aman-jery sasany ho mpamokatra vaovao faikany, izay hita fa ezaka hampihenana ny tati-baovao mitsikera ny fitondrany ihany koa izy.
Filipina: Fameperana ny Media Sosialy
Tahaka an'i Trump sy Hun Sen, mitsipaka ireo tsikera ihany koa ireo mpanao politika sasany ao Filipina amin'ny alalan'ny fametahana anarana ny haino aman-jery ho “vaovao faikany.”
Miresaka ny zava-nitranga hafa tao amin'ny Fikambanan'ny Firenena Azia Atsimo Atsinanana, namariparitra  ny tatitra avy amin'ny New York Times momba ny Filoha Rodrigo Duterte ho vaovao faikany ihany koa ny Sekreteran'ny Biraom-pifandraisan'ny filoha, Martin Andanar:
Lainga ihany no taterin'izy ireo. Antsointsika hoe vaovao faikany izany. Tahaka an'i Richard Paddock ao amin'ny New York Times.
Mazava tsara fa nanoratra azy io fotsiny mba hanaratsiana ny Filoha izy.
Mandritra izany fotoana izany, nametraka volavolan-dalàna ny filohan'ny Antenimiera, Pantaleon Alvarez izay mandidy  ny tokony hanamarinan'ny orinasan'ny media sosialy ny mombamomba ny mpiserasera alohan'ny hanoratana azy ireo ao amin'ny tambajotran'izy ireo, amin'izay izy ireo afaka manakana ny mpiserasera mba tsy hamorona kaonty faikany sy hanaparitaka vaovao faikany. Nampahafantatra  orinasa media sosialy sasany mety ho voakasiky ny volavolan-dalàna mihitsy aza ny Lalànan'ny Fandrindràna ny Media Sosialy 2017:
Ity tolo-dalàna dia mikatsaka hanome fepetra fanitsiana ireo olana voalaza teo aloha ary handrindra ireo haino aman-jery sosialy amin'ny alalan'ny fandidiana ny orinasan'ny media sosialy (Facebook, Twitter, Instagram sns) mba hanamarina araka ny tokony izy ny mombamomba ny mpiserasera alohan'ny hamelàna azy ireo hanokatra kaonty. Misy ihany koa ny sazy omena amin'ny tsy fanajana izany fepetra fanamarinana izany.
Nilaza ireo manampahaizana momba ny media sosialy fa marina ny an'ny Filohan'ny Antenimiera raha milaza ny olan'ny vaovao faikany sy ny halatra anarana ao amin'ny media sosialy saingy nampahatsiahy azy izy ireo fa tsy ilaina  sy tsy mila ampiharina ny fepetra. Niaro ny zon'ny mpiserasera sasany hijanona tsy mitonona anarana rehefa maneho ny heviny ihany koa izy ireo.
Fanamarinana ny tranonkala hiadiana amin'ny vaovao faikany
Mandritra izany fotoana izany, nanangana vavahadin-tserasera fanamarinana ny fitondram-panjakana sasany ao Azia Atsimo Atsinanana ho fanoherana ny fitomboan'ny vaovao faikany.
Nampahafantarin'i Malezia ny Sebenarnya.my , “fitaovana an-tserasera mamela ny vahoaka hizara vaovao tsy voamarina miely ao amin'ny media sosialy, tolotra hafatra fohy sy tranonkala miaraka amin'ny sampan-draharaham-panjakana azo antoka” mba hanampy amin'ny fanamarinana ireo loharanom-baovao antserasera sy hanaisotra vaovao diso. Sebenarnya dia voambolana Bahasa midika hoe “marina”.
Tsy irery i Malezia amin'izany. Nanomboka tamin'ny taona 2012, manitsy ireo “tati-baovao tsy marina amin'ny alalan'ny tranonkalany “Factually” ” ny governemantan'i Singapaoro. I Indonezia koa mandritra izany nanambara fa hanangana sampan-draharaham-baovao  an-tserasera tsy ho ela mba hiadiana amin'ny vaovao faikany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/11/97986/
 hisoratra anarana: https://globalvoices.org/2013/06/03/free-my-internet-movement-rises-in-singapore/
 niaro : http://www.straitstimes.com/singapore/pm-lee-on-bbcs-hardtalk-most-would-back-retaining-section-377a-if-a-referendum-was-held
 ny vondrona haino aman-jery sasany ho mitatitra vaovao faikany: http://www.politico.com/story/2017/03/trump-cnn-fake-news-polls-236250
 tsy ilaina: http://cnnphilippines.com/news/2017/03/04/experts-criticize-social-media-regulation.html